Kpuru ìsì Lady Justice Disc Pendant (14K) - Popular Jewelry
Nwanyi nzuzu ikpe nzu
A karat edo edo edo 14 na-egosipụta Nwanyị kpuru ìsì Lady Justice na matte imecha gbara ya gburugburu na-egbu maramara ókè.
Elu: 24.5 mm
Oke: 17.19 mm
Ikike dịnụ: ~ 2.9 gram *
Dabere na 4 nyocha
Mara mma mara mma. Naanị ihe m kwuru bụ na enwere ihe ọgbụgba na azụ nke blọgụ tara akpụ. Nke a dị ka ebe ejiri gbanye snap na bale. Enwere m nchegbu ụfọdụ na nke a ga-emecha ma ọ bụ yiri uwe mwụda nwa m nwanyị ma na-eme atụmatụ ịga n'ihu na-enye ya dịka onyinye n'izu na-abịa. Ga-akpọghachi ma ọ bụrụ na ọ bụ esemokwu. Daalụ maka inye m ya!
Ihe a ka akọwapụtara na nnukwu mbupu ọsọ ọsọ! Daalụ!!
Emechara nke ọma.
Inghụ pendụ ahụ n'onwe m masịrị m karịa ihe osise. Ọcha na nkọwa zuru oke dị oke mma. Kpamkpam ịkwado!
Kpuru ìsì ikpe ziri ezi Disc Pendant (14K)